Fandraisana paraky sy sigara Hisy torohevitra maimaimpoana homena ireo miankin-doha
Mahatratra 6 tapitrisa isan-taona ireo olona maty vokatry ny fifohana sigara sy ny fihinanana paraky maneran-tany. Raha misy olona iray matin’ny SIDA amina toerana iray dia mahatratra telo kosa ireo matin’ny sigara sy paraky.
Loza mananontanona ho an’ny rehetra, araka izany, ny fandraisana ireo mahadomelina ireo, antony nanosika ny “Centre de Cure Aro Aina”, tarihin’ny dokotera Andriamiarinarivo Miarintsoa hanao hetsika goavana etsy amin’ny tahala Rarihasina Analakely, hanomboka anio zoma 31 mey, haharitra roa andro. Anisan’ny hotontosainy amin’izany ny fanomezana torohevitra maimaimpoana ireo olona hita fa tena miankin-doha amin’ireo mahadomelina ireo. Tafiditra ao ny fanomezana fanafody hahafahana manafaka ireo olona voafatotra. Amin’ny ankapobeny, mahatratra 30 isam-bolana ireo olona tonga manatona ity ivontoerana ity ka ny 75 % dia eo anelanelan’ny 15 ka hatramin’ny 22 taona ary 10 taona no zandriny indrindra. Maro ny aretina ateraky ny fifohana sigara sy ny fihinanana paraky raha tsiahivina toy ny homamiadan’ny avokavoka … Hankalazaina anio zoma ny andro maneran-tany iadiana amin’ny fidorohana ireo mahadomelina ireo.